Kudzidza kudzidzisa: Iyi danga ine zvivakwa zvechokwadi here? | Kuumbwa uye kudzidza
Kudzidza kudzidzisa: Ko kuraira uku kune zvivakwa zvechokwadi here?
Kudzidza kurairidza: Unechokwadi mikana yemabasa? Zvatozivikanwa kuti maprofessional inyaya yemafashoni, kwagara kuine maprofessional ane mikana yakawanda kudarika vamwe. Uye parizvino, zvinoita sekunge nguva yasvika coaching. Kuraira uko, mukukosha, kuri kutsva kwazvo, saka muchikamu kukura kwayo kukuru. Nekudaro, izwi rekuti coaching rinoshandiswa zvakanyanya kusununguka uye zvachose kunze kwemamiriro.
Semuenzaniso, iyo chirongwa Izwi inoshandisa zita remurairidzi kuti atumidze David Bisbal, Malú naMelendi, kana zvirizvo, hapana kana mumwe wavo akaisa maitiro ekudzidzisa.
Chimwe chokwadi ndechekuti mazuva ano, makosi enyaya iyi anopiwa zvakawandisa, zvakare nekuti pane yakawanda yekuda. Nekudaro, kana iwe uchinyatsoda kutora yakakomba kosi, saka tungamirwa na maawa izvo zvataura kosi. Hapana nyanzvi inogona kudzidziswa mumaawa makumi maviri kana makumi mashanu. Kana izvo zvaunoda chaizvo kuita kurarama kubva mukurairidza, saka bheji pakuve Nyanzvi Yekudzidzisa uyo anokubvumidza nenzira kwayo.
Kune rimwe divi, tora kosi iri pakati inotsigirwa nemasangano akadai se Asesco nekuti pakadai, unogona kuva nechokwadi chekuti uchave nerombo rakaringana kudzidza kubva kune vanokwanisa nyanzvi. Kudzidzisa kune zvakawanda zvine chekuita nekudana. Kudzidza kudzidzisa nekuda kwemikana yebasa yainopa haisi zano rakanaka. Murairidzi ndeye uyo anoda kubatsira vamwe vanhu kuti vafare. Naizvozvo, chingave chiratidzo cheunyengeri kusaita nemuenzaniso.
Naizvozvo, zvakakosha kuti uwirirane sehunyanzvi, nekudaro, kudzidzisa kuraira inonakidza kune avo vakadzidza Psychology Semuyenzaniso. Murairidzi anoshanda nevanhu, nekudaro, iri basa rinonakidza sekureba kwarinoitwa uine hunhu hunodiwa.
Mamwe mashoko - Kudzidzisa, musuwo wakakosha wehunyanzvi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Kudzidza kudzidzisa: Ko kuraira uku kune zvivakwa zvechokwadi here?
Caja Madrid FP Scholarship
Makosi evechidiki muHuelva